Wholesale Reusable uye Durable Pe mbatatisi inokura bhegi 10 Gallon Tent uye Greenhouse | Kukunda
Reusable uye Durable Pe mbatatisi inokura bhegi 10 Gallon
3000-4999 Zvidimbu 5000-9999 Zvimedu > = 10000 Zvimedu
Aya mashegi ekukura akangwara akakodzera kudyara kwemukati nekunze uye kwakanakira materu, madiki magadheni, balcony, makamuri ezuva uye chero nzvimbo yekunze. Inogona kushandiswa kurima mbatatisi, taro, radishes, karoti, hanyanisi, magaka, mapurantipurosi, mhiripiri, zucchini nemimwe miriwo mizhinji.
1) Reusable uye yakasimba dema zvinhu.
2) Kutarisa Velcro hwindo.
3) Great mhepo kutenderera uye mvura abudise.
Model Nhamba WS-GB1
Item zita Reusable uye Durable Pe mbatatisi inokura bhegi 10 Gallon
Kukura kwechigadzirwa Dia.35xH45cm
Mucheka zvinhu 160gsm PE
Kurema 0.13 makirogiramu
MOQ 3000 zvidimbu
Aya mabhegi ekudyara gadheni akakodzera kudyara kwemukati nekunze. Izvo zvakanaka kune patio, mabhalconi, madiki magadheni, makamuri ezuva, uye chero nzvimbo yekunze. Ivo vakaringana kudyara mbatatisi, taro, radish, karoti, hanyanisi, nzungu uye mimwe miriwo mizhinji. Unogona kushandisa mabhegi ekukura aya ese mwaka. Uye kwete kutora yakawanda nzvimbo yekuchengetedza.
Izvi bhegi rekudyara rakagadzira hwindo revelcro. Kubudikidza nepahwindo, unogona kutarisa kana chirimwa chako chakura muhari yakanaka. Iwe zvakare unogona kutora chako chirimwa kunze nepahwindo.
Yakakura mweya kutenderera uye mvura yemudhiraivho: Iwo maburi ane mweya pazasi neparutivi anogona kupa hukuru mweya kutenderera uye mvura yemadhiraini, kudzivirira kutenderera midzi uye nemhepo-inodonhedza iyo yemidzi midzi chimiro, inowedzera kukura kwezvirimwa uye goho.
【Yakasimba Pe Chinyorwa】: Rudzi urwu rwekukura bhegi rakagadzirwa nemvura isina mvura PE, isina huremu uye yakasimba yakasimba, inoshandiswazve kwemakore mazhinji, iri nyore kufema uye kukura. Zvakare inogona kudzivirira pamusoro pekudiridza uye inogona otomatiki kupaza yakawandisa mvura. Inopa nharaunda ine hutano yemidzi midzi
Bvisa zvirimwa zvese, ivhu, manyowa, sukurudza nesipo nyoro uye woichengeta yakaoma uye peta yakati sandara yekuchengetera kuzoshandisa mwaka unotevera.
Pashure: Kunze Kunorema Duty Kuroora Marquee 20x40ft
Zvadaro: 2-Rongedza Bindu Rinodyara Bhegi Ikura Miriwo Eco-inoshamwaridzika PE Mbatata Ikura Bhegi
Famba-muGreenhouse Kurima 26x13x7ft (8x4x2m)
Yekurima Plastic Bindu Kufamba-muGreenhouse ...
4x3x2m Plastic Kufamba-muGreenhouse Tunnel
Pe Plastiki Bindu Greenhouse 4x2x2m